ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း - ယူကေတွင်ရှိသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ
သင်ကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Million Makers United သည်ဝယ်ယူသူများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် CRM Solutions၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ရုံးခွဲများနှင့်အတူယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေများအပြည့်အစုံကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သည်။ , ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
အင်္ဂလန်ကိုအင်္ဂလိပ်ချန်နယ်ကနေဥရောပတိုက်ကြီးနဲ့သီးခြားစီခွဲထားတယ်။ နယ်မြေသည်ဗြိတိန်ကျွန်းစုများဟုခေါ်သည့်ကျွန်းစုများဖြစ်သောဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Hebrides, Shetlands, Orkneys, Isle of Man နှင့် Isle of Wight ကျွန်းစုများမှကျွန်းစုဝေးမှုများအပြင်။ ကျွန်းတစည်းသည်အိုက်စလန်၏အရှေ့တောင်ဘက်၊ နော်ဝေးနှင့်ဒိန်းမတ်အနောက်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်တွင်မြောက်ပင်လယ်နှင့်အနောက်ဘက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကြားတွင်ရှိသည်။ ယူကေသည်ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေနှင့်ဖရဲကျွန်းများ (ဒိန်းမတ်) သို့သမုဒ္ဒရာအစွန်အဖျားကိုပေးသည်။
စတုရန်းကီလိုမီတာ ၂၄၂,၉၀၀ ကီလိုမီတာရှိသောအင်္ဂလန်သည်စပိန်နိုင်ငံအရွယ်အစား၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ထက်အနည်းငယ် ပို၍ ကျိုးနွံသည်။ 'ထူးခြားသော' တိုင်းပြည်တစ်ခုသည်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါဗြိတိသျှအင်ပါယာသည်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်ရာစု၏အဓိကတစ်ဝက်တွင်ဗြိတိန်၏အရည်အသွေးသည်ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲနှစ်ခုတွင်အခြေခံအားဖြင့်ညှစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ဝက်တွင်အင်ပါယာနှင့်ယူကေသည်အဆင့်မြင့်။ သာယာဝပြောသောဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့သူ့ဟာသူပြန်လည်ပြုပြင်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှတာ ၀ န်ရှိသူ ၅ ဦး အနက်မှယူကေသည်နေတိုးနှင့်ဓနသဟာယမှတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကမ္ဘာချီနည်းလမ်းရှာဖွေသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိဥရောပနှင့် Brexit နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂမှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဥရောပငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏အပြင်ဘက်တွင်နောက်ထပ်အသိပေးချက်မပေးဘဲနေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်ယူကေတွင်အရေးကြီးသည့်ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စကော့တလန်၊ ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်တို့တွင်ပြင်းထန်သောမတူညီသောဒေသခံအသင်းတော်များကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
လန်ဒန်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်မဟုတ်သောမြို့တော်ဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေအရနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အစိုးရ၏အရေးကိစ္စများ၊ အကောင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုလန်ဒန်သည်အင်္ဂလန်၏တရားဝင်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ စကော့တလန်တွင်အက်ဒ်ဘာ့ဂ်မြို့၊ ဝေလနယ်များတွင်ကာဒစ်ဖ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်တွင်ဘဲလ်ဖတ်မြို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏မှတ်ပုံတင်စာရင်းအရယူကေတွင်နေထိုင်သူ ဦး ရေသည် ၆၃ သန်းကျော်ရှိပြီးလူ ဦး ရေ ၆၇ သန်းအထိရှိလာသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက်မှာအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ရိုးရှင်းမှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အရယူကေသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများစုတို့၏စုစုပေါင်းရမှတ်များအတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်း၏မှတ်သားဖွယ်အကောင်းဆုံးရိုးရှင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်အဆင့်မြင့်တပ်ဆင်ခြင်းမှအိုင်တီအထိတံခါးဖွင့်ထားသောတံခါးအနည်းငယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အခြားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစတင်ရန်ကန့်သတ်ချက်များသည်အရှေ့နှင့်အနောက်နိုင်ငံများရှိအခြားဖန်တီးထားသောနိုင်ငံများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်သည်။
လှုပ်ရှားမှုများကိုဥရောပသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၏နောက်ကွယ်ရှိအခြားမရှိမဖြစ်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာပါရမီရှင်များပြားလှသည့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ယူကေတွင်လူ ဦး ရေသန်း ၃၀ ကျော်ရှိသောအလုပ်သမားအင်အားရှိပြီးဥရောပသမဂ္ဂတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာဗြိတိန်နိုင်ငံသည်လည်းလာမည့် ၁၅ နှစ်အတွင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေမည့်အဓိကဥရောပနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုသင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ယူကေတွင်စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအပါအဝင်ဒေသများတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်တိုးမြှင့်မှုများတိုးတက်လျက်ရှိသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် United Kingdom တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်သည်။ သင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ရုံးခန်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ယူကေတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ CRM Solutions၊ Merchant account United ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တိုးတက်မှု၊ ယူကေရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ပေးရန် ngdom ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တည်ထောင်ပြီးသားကုမ္ပဏီများအတွက် - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအဝင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၌အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးပြီး၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေရာချထားရန်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စီးပွားရေးကိုရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ယူကေတွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ယူကေတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း၊ , CRM Solutions, United Kingdom ရှိကုန်သည်စာရင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ယူကေတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ယူကေနိုင်ငံတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သောယူကေ၊ ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ယူကေရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးမှု ngdom, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ United Kingdom မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပြီးကမ္ဘာမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြေရှာပေးသူများသာဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account United Kingdom / Payment Gateway ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
●ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်အတွက် ၀ န်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၃၀၀
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၆၅
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
● United Kingdom တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●ဗြိတိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်သင့်အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသည့်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်နီးကပ်စွာအခမဲ့အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ သင်သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Private Limited မှယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Private Limited ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောအစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌တည်၏
သင်သည် United Kingdom တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် United Kingdom တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဗြိတိန်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဖွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအင်္ဂလန်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးသည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်သုံးစွဲသူများအား“ ၁ နာရီအခမဲ့အကြံဥာဏ်” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံးကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟုလည်းလူသိများသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဝန်ဆောင်မှုများ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးအပ်သည့် United Kingdom အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ စီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်“ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီတွင် -
United Kingdom တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ် / ယူကေတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ယူကေတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက် (UK) ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက် / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ။
ဗြိတိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / ယူကေတွင်ရှိသောပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဗြိတိန်ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက် / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ -
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျ United Kingdom မှာလိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ရှိကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသည့်အနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းများ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ငွေယူလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်ယူကေတွင် Professional CFA နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစာရင်းကိုင်များ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Corporate Services | လီဗာပူးလ်ရှိ Corporate Services | Nottingham ရှိ Corporate Services
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများပါဝင်မှုအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံများ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | လီဗာပူးလ်ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | Nottingham ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးပါက online လျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း.
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌တည်၏
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေသူများ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာကိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်သူတို့၏ယူကေနိုင်ငံတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများကိုခေါ်ယူပြီးဗြိတိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်၊ ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တွင်ပါဝင်ခွင့်ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထောက်ပံ့သည် ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ပါဝင်မှု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၎င်းမှာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့် PVT LTD ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တည်ထောင်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုဗြိတိန်တွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ PVT LTD ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ရှိသောကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံရှိကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PVT LTD ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Kingdom Offshore PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ၎င်းမှာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ပါဝင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ PTE သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်တွင် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းယူကေတွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူကေနိုင်ငံရှိကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Private Limited ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ PTE ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ အင်္ဂလန်တွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
အမေးအဖြေများ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့ကြီးများမှာလီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီဗာပူးလ်မှပြုလုပ်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Nottingham မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Nottingham မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Nottingham မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လီဗာပူးလ်တွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီ Nottingham တွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ လီဗာပူးလ်တွင်ရှိသောမြို့များရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ လီဗာပူးလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များ၊ လီဗာပူးလ်မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များလီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ နော့ဂ်ဟမ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Nottingham ရှိ Nottingham ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Nottingham ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ လီဗာပူးလ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Nottingham တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ပေးအပ်သည်မှာ United Kingdom တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုလီဗာပူးလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လီဗာပူးလ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Nottingham ရှိ Nottingham ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Nottingham ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Nottingham ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ လီဗာပူးလ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Nottingham တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ , မြို့များသည်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ လီဗာပူးလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Nottingham တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Nottingham တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Nottingham တွင်တည်ထောင်ခြင်း၊
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ လီဗာပူးလ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Nottingham တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ လီဗာပူးလ်တွင်နေထိုင်သူများ၊ လီဗာပူးလ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီဗာပူးလ်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နော့ဂ်ဟမ်တွင်မနေထိုင်သူများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လီဗာပူးလ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလီဗာပူးလ် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Nottingham
စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် | လီဗာပူးလ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Nottingham ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန် (သို့) ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထည့်သွင်းပါ လီဗာပူးလ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို Nottingham တွင်ထည့်သွင်းပါ
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နေထိုင်သူများမဟုတ်သောသူများ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်မနေထိုင်သူများ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း , ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်မနေထိုင်သူများနှင့်အတူ United Kingdom တွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Offshore PVT LTD မှ United Kingdom တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, PVT LTD ကုမ္ပဏီ United Kingdom တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း United Kingdom, United Kingdom PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန် PVT LTD ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများနှင့်အတူ PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန် PTE Reg ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အင်္ဂလန်တွင် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ PTE သည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌နေထိုင်သူများနှင့်အင်္ဂလန်တွင် PTE ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အင်္ဂလန်တွင် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကမ်းလွန် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယူကေတွင် PTE ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PVT LTD ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကိုထည့်သွင်းပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် PTE ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိသင်၏ကုမ္မဏီပါဝင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးကဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောပမာဏနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးပြီးလီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး United Kingdom မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းလီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်မည်။ လီဗာပူးလ်တွင်လီဗာပူးလ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ နော့ဂ်ဟမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်၊ နော့ဂ်ဟမ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်နော့ဂ်ဟမ်ကုမ္ပဏီ၌တည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်နော့ဂ်ဟမ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်နော့ဂ်ဟမ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Nottingham တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု လီဗာပူးလ်တွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Nottingham တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်နေသဖြင့်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံမှုမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ၊
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စာရင်းဝင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းဥပဒေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွင်းမှသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူတစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဗြိတိန်မှဖြစ်စေယူကေသို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိစက်ရုံများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေး၊ သိုလှောင်ခြင်း၊
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွင်းမှဖြစ်စေ၊
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုယူကေမှာဖြစ်စေ၊
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ (သို့) ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအခြေခံသောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ရောင်းဝယ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။
●ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဘဏ်အကောင့်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယုံကြည်မှု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-united-kingdom-private-limited/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-united-kingdom-private-limited/ မှသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လာသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-united-kingdom-private-limited/